amụma nzuzo — HunterThinks.com
Anyị website adreesị bụ: https://www.hunterthinks.com.
Gịnị onye data anyị na-anakọta na ihe mere anyị na-anakọta ya
Mgbe ndị ọbịa ịhapụ ihe na saịtị anyị na-anakọta data gosiri na ihe ụdị, na kwa esenowo na adreesị IP na ihe nchọgharị ọrụ gị n'ụlọnga eriri aka spam nchọpụta.
An anonymized eriri kere si gị email address (na-akpọ a hash) nwere ike nyere ndị Gravatar ọrụ ịhụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ya. The Gravatar ọrụ iwu nzuzo dị ebe a: https://automattic.com/privacy/. Mgbe ihu ọma gị comment, profaịlụ gị picture bụ anya ka ọha na eze na onodu nke gị comment.
Ọ bụrụ na ị bulite ihe oyiyi na website, ị kwesịrị izere ebugote oyiyi na agbakwunyere ebe data (EXIF GPS) gụnyere. Ọbịa ka website nwere ike ibudata ma wepụ ihe ọ bụla ọnọdụ data si oyiyi na website.
Ọ bụrụ na ị na-ahapụ a ikwu na anyị na saịtị i nwere ike ịpụ na-aka na-azọpụta gị aha, email address na website na kuki. Ndị a bụ gị mma nke mere na ị na-adịghị na jupụta na gị nkọwa ọzọ mgbe ị na-ahapụ ọzọ comment. Kuki ndị a ga-adịgide adịgide maka otu afọ.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na ị abanye na saịtị a, anyị ga-emekwa ka a nwa oge kuki iji chọpụta ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị na-anabata kuki. Kuki a na-nwere dịghị onye data na a tụfuru atụfu mgbe ị na-emechi ihe nchọgharị gị na.
Mgbe ị na-abanye na, anyị ga-eme ka ọtụtụ kuki iji chekwaa ozi nbanye gị na gị na ihuenyo ngosi nhọrọ. Nbanye kuki ikpeazụ n'ihi na ụbọchị abụọ, na ihuenyo nhọrọ kuki-adịgide adịgide maka a afọ. Ọ bụrụ na ị họrọ “Cheta m”, nbanye gị ga-adịgide ruo izu abụọ. Ọ bụrụ na ị na-apụ nke akaụntụ gị, nbanye kuki ga-ewepụ.
Ọ bụrụ na ị idezi ma ọ bụ na-ebipụta isiokwu, ihe ọzọ kuki ga-azọpụta gị nchọgharị. Kuki a na-agụnye mba onwe onye data na nanị na-egosi na post ID nke isiokwu na ị dị nnọọ dezie. Ọ expires mgbe 1 ụbọchị.
Agbakwunyere ọdịnaya site ọzọ weebụsaịtị
Isiokwu a na saịtị nwere ike na-agụnye agbakwunyere ọdịnaya (e.g. videos, oyiyi, isiokwu, wdg). Agbakwunyere ọdịnaya site ọzọ weebụsaịtị na-akpa àgwà na kpọmkwem n'otu ụzọ ahụ dị ma ọ bụrụ na onye ọbịa gara nke ọzọ website.
Ndị a weebụsaịtị nwere ike ịnakọta data banyere gị, iji kuki, Embed ọzọ-atọ ndị ọzọ nsuso, ma nyochaa gị mmekọrịta na agbakwunyere ọdịnaya, tinyere n'ịkpọ gị na mmekọrịta na agbakwunyere ọdịnaya ma ọ bụrụ na i nwere otu akaụntụ ma na-ite na na website.
Onye anyị ịkọrọ gị data na
Otú oge anyị na-ejigide gị data
Ọ bụrụ na ị na-ahapụ a comment, ikwu na ya metadata na-edebe ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụ otú anyị nwere ike na-aghọta na mma ọ bụla ndị na-kwuru-akpaghị aka kama ejide ha na a imeru ihe n'ókè kwụ n'ahịrị.
N'ihi na ọrụ na-aha na anyị na website (ma ọ bụrụ na ọ bụla), anyị na-echekwa ozi nkeonwe ha na-enye ha ọrụ profaịlụ. All ọrụ pụrụ ịhụ, edit, ma ọ bụ hichapụ na ha onwe onye ozi n'oge ọ bụla (ma e wezụga na ha nwere ike ghara ịgbanwe ha aha njirimara). Weebụsaịtị ọchịchị nwekwara ike ịhụ ma dezie ozi.
Gịnị ikike i nwere karịrị gị data
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na saịtị a, ma ọ bụ hapụrụ comments, i nwere ike ịrịọ ka e exported faịlụ nke onwe onye data anyị jide banyere gị, tinyere ọ bụla data i nyere anyị. I nwekwara ike na-arịọ na anyị na-akwụsị ihe ọ bụla onye data anyị jide banyere gị. Nke a adịghị agụnye ọ bụla data anyị na-ụgwọ na-maka ndutịm, iwu, ma ọ bụ ebumnuche nche.
Ebe anyị na-eziga gị data
Onyeọbịa comments nwere ike-enyocha site na akpaghị aka spam nchọpụta ọrụ.
Olee otú anyị chebe gị data
Gịnị data iro usoro anyị nwere na ebe
Gịnị ọzọ anyị na-enweta data si
Gịnị akpaghị aka ime mkpebi na / ma ọ bụ àgwà anyị na-eme na onye ọrụ data
Ụlọ ọrụ usoro iwu ngosi chọrọ